XOG: Wax Ka Ogow Musiibooyinkii Shilalkii Diyaaradeed Ee Kubbada Cagta Aduunka Gilgilay, Ciyaartoydii Ku Dhimatay Iyo Xusuusta Taariikhda Madow Ee Ay Yeelatay. - GOOL24.NET
XOG: Wax Ka Ogow Musiibooyinkii Shilalkii Diyaaradeed Ee Kubbada Cagta Aduunka Gilgilay, Ciyaartoydii Ku Dhimatay Iyo Xusuusta Taariikhda Madow Ee Ay Yeelatay.
November 1, 2018 Mahamoud Batalaale
Kubbada cagta aduunku waxay u muuqataa mid hal qof oo kaliya ah isla markaana isku dareen ah markasta oo ay dhacaan musiibooyinka ku habsada shaqsiyaada kubbada cagta ku abtirsada, waxaana taas la dareemaa marka ay dhibaato ku dhacdo koox, ciyaartoy ama shaqsi kale oo kubbada cagta ku soo lug yeeshay.
Todobaadkan waxaa kubbada cagta aduunka gilgilay shilkii diyaaradeed ee ka dhacay garoonka kooxda Leicester City ee King Power Stadium halkaas oo ay ku gudh baxeen mulkiilihii kooxda Leicester City ee Vichai Srivaddanapraba iyo afar xubnood oo kooxdiisa ka tirsanaa.
Waxay arintani abuurtay in koox kasta iyo ciyaartoydii hore si la mid ah ciyaartoyda waqti xaadirkan ciyaaraa ay dareen isku mid ah ka bixiyeen xaaladii musiibada ahayd ee ku habsatay kooxda Premier League ka ciyaarta ee Leicester City oo ilaa hadda la murugaysan wixii kooxdeeda ku dhacay.
Mulkiilihii kooxda Leicester City ee Vichai Srivaddanapraba ayaa aduunka ka kabsaday magac wayn kadib markii uu iibsaday Leicester City oo xaalad xun ku jirtay isla markaana aan aduunka aqoon looga lahayn balse qaabkii wareerka ahayd ee uu kooxda uga caawiyay in ay koobka Premier League ugu guulaysatay ayaa micno wayn sameeyay.
Waxa kale oo uu ahaa Vichai Srivaddanapraba mulkiile aan ku koobnayn maamulida kooxdiisa wuxuuna noqday mid ka mid ah taageerayaasha kubbada cagta ugu wayn maadaama oo uu kulan kasta oo King Power Stadium ay Foxes ku ciyaaraysay uu ka soo xaadiri jiray.
Sababta ay ilaa hadda jamaahiirta kooxda Leicester City u murugaysan yihiin ayaa ah in mulkiilihii kooxdooda ee Vichai Srivaddanapraba uu ahaa taageere ka mid ah oo kulan kasta la daawan jiray, waana arin ayna samayn karin mulkiilyaaasha kooxaha kubbada cagta aduunka ugu waa wayni.
Haddaba murugadii iyo musiibadii Leicester City ee todobaadkan, waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa saddex shil diyaaradeed oo musiibo wayn ku ahaa kubbada cagta isla markaana aduunka oo dhan laga dareemay iyo qaabkii ay waxyeeladoodu u dhacday.
Halkan kaga boggo xogta saddexdii shil diyaaradeed ee ka hor musiibadii Leicestera City kubbada cagta aduunka gilgilay.
3- Shilkii Diyaaradeed Ee Kooxda Reer Brazil Ee Chapecoense (28 November 2016)
Maalintii November 28,2016 kii waxay ahayd maalin ayna abid kubbada cagta aduunku ilaawi doonin kadib markii ay gabi ahaanba burburtay diyaaradii siday kooxda reer Brazil ee Chapecoense iyada oo duulimaadkii Avro RJ85 uu siday 77 qof oo ay inta ugu badan ahaayeen ciyaartoydii iyo shaqaalihii kooxdan.
Markii ay diyaaradu dul maraysay dalka Colombia isla markaana ay ciyaartoydu ku faraxsanaayeen in ay ku dhaw yihiin goobtii ay ku ciyaari lahaayeen finalkii koobka Copa Sudamericana waxay hal mar diyaaradu noqotay mid burburtay oo qashin isku badashay.
Waxay ahayd markii ugu horaysya ee kooxda Chapecoense ay soo gaadhay finalkii Copa Sudamericana laakiin waxay la kulantay musiibadii ugu waynayd kadib markii ay shilkan ku geeriyoodeen dhamaan ciyaartoydii kooxdeeda kowaad marka laga reebo 3 ciyaartoy oo iyagana uu burbur wayni soo gaadhay.
Dhamaan shaqaalihii iyo ciyaartoydii kooxda Chapecoense ayaa halkaas ku shuf beelay marka lag reebo saddexda ciyaartoy ee aan soo sheegnay iyo 4 ka mid ah shaqaalihii diyaarada oo siyaabo kala duwan loo badbaadiyay.
Qalad uu sameeyay duuliyihii diyaarada ayaa sabab looga dhigay burburkii iyo musiibadii diyaaradan ay ku qudh baxeen tiradii ugu badnayd ee ciyaartoyda kooxda Chapecoense kadib markii uu duuliyuhu ku fashilmay in uu si deg deg ah u soo fadhiisiyo markii ay cilad dhinaca korontoda iyo shidaalka ahi soo food saartay.
Kubbada cagta aduunka oo dhan ayaa weer cad xidhatay waxaana laga dareemay garoon kasta oo kubbad lagu ciyaarayay iyada oo baroor diiq wayn loogu sameeyay garoomada kala duwan ee aduunka.
Bogga 2-aad Iyo 3-aad Kaga Bogo Xogta Qaybaha Kale Oo Faah Faahsan.